म राजीनामा दिनेवाला छैन : प्रधानमन्त्री ओली
November 4, 2020 adminLeaveaComment on म राजीनामा दिनेवाला छैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट आफूले राजीनामा नदिने बताएका छन् । मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवन उद्घाटन गर्दै ओलीले आफूले राजीनामा दिनु भनेको बर्बादीतिर जान दिनु भएकाले राजीनामा नदिने बताए ।
आफूले राजीनामा दिन लागेको भनेर सञ्चारमाध्यममा हल्ला फैलाइएको भन्दै उनले राजीनामा नदिने प्रष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यमहरूमा हल्ला फैलाइन्छ, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन पस्यो । तर तपाईंहरू विचार गर्नुस् के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ ? अहिले राजीनामा दिनु भनेको बर्बादीतिर जान दिनु हो। त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अहिले राजीनामा दिन नमिल्ने तर्क पनि गरेका छन् । उनले भने, ‘मैले अहिले राजीनामा दिन मिल्छ ? व्यापक जनसमर्थनबाट हो यो ठाउँमा आएको हो। ढुक्क भएर काममा लाग्नुस्, सरकार फेरिन्छ बदलिन्छ कि भन्ने होइन। केही हुनेवाला छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जेमा पनि आलोचना गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘भित्र-बाहिर अनेक कोसिस त भए। जेमा पनि आलोचना गर्ने ? देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट प्रभावित नभइ काम गर्नुपर्छ।’
ओलीले स्थिरताका लागि आफूले काम गरिरहेको र स्थिरताले विकास तथा परिवर्तन ल्याउने दाबी पनि गरेका छन् । नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओलीबाट एकाएक आएको राजीनामाको प्रसंगलाई अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ । नागरिक खबर बाट
समाचार – भर्खरै सरकारले जारी गर्यो यस्तो निर्णय ।
भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेलाई ‘कालो झण्डा देखाउँछु’ भन्ने पुण्य गौतम पक्राउ
भारतमा कोरोना खोप अभियानको दोश्रो दिनः बिरामीमा देखि थाले यस्ता साइड इफेक्ट,,,,हेर्नुस् ।
सक्दो सेयर गरौ दया माया छ भने ! (लोग्नेको मृ त्यु भएको भोलिपल्ट काजकिरिया गर्ने खर्च जुटाउन रुदै भि ख मागिरहेकी महिला !
प्रचण्ड सहितका नेताहरुको सम्पति छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग , ओलिले यसरी भ्रस्टहरुको पत्तसाप गर्र्दै,,,,,हेर्नुस् ।
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकामना पुरा गरुन,माघ ५ गते सोमबार,तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
फाइजरको भ्याक्सिन लगाउँदा १० दिनभित्र एकै देशमा २३ जनाको मृ`त्यु !,,,,हेर्नुहोस् ।